The Ab Presents Nepal » विप्लवको बन्द जायज, अब जनविद्रोहको तयारी!
विप्लवको बन्द जायज, अब जनविद्रोहको तयारी!
उनी भन्छन्, ‘ बन्द लगायत सरकारविरोधी कार्यक्रममा हाम्रो समर्थन छ, तर हिंसात्मक गतिविधि हामी अस्वीकार गछा्रैै ।
आज देशमा जतिपनि विष्फोटका घटना भएका छन् ती सबैमा विप्लव समूहको संलग्नता पुष्टि भएको छैन । यो आरोप मात्र हो । अझ सरकारले एउटा राजनीतिक पार्टीलाई आपराधिक समूह घोषणा गरी प्रतिवन्ध लगाउने, उसका कार्यकर्तालाई यातना दिएर हत्या गर्ने काम गैर न्यायिक हो । सरकारले नै उत्तेजना फैलाइरहेको छ, यो रोकिनु पर्छ । ’ रायमाभी भन्छन् ।